Source Url: https://ekantipur.com/news/2020/03/24/158501558452923976.html
काठमाडौँ — ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धामा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढी हुने भनिए पनि विशेष सावधानी अपनाए सुरक्षित हुन सकिने चिकित्सकले बताएका छन् । कडा रोग र दीर्घरोगीबाहेक अन्यलाई संक्रमण भइहाले पनि मृत्युको जोखिम न्यून हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसका लागि बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म जुनसुकै बेला टोल फ्रि नम्बर १६६००१०२००५ मा फोन गरेर परामर्श लिन सकिने डा. गौतमले बताए। रिदम न्युरो साइक्याट्री अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. रितेश थापाले बिहान साढे ७ देखि ९ बजेसम्म ९८१४२६७२४२ मा फोन गरेर मनोपरामर्श गर्न सकिने जानकारी दिए। प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ ०७:५१